I-Pitbull Lab Mix: Okufanele Ukwazi Ngaphambi Kokuthenga ILabrabull - Izinhlobo
I-Pitbull Lab Mix: Okufanele Ukwazi Ngaphambi Kokuthenga ILabrabull
I-Pitbull Lab Mix iyiLabrador Retriever kanye ne-Pitbull hybrid .
Lesi siphambano sikhipha okuhle kakhulu kuzo zombili lezi zinja ezithandekayo.
AmaLabrabulls yizinja ezidlalayo ezizohlala ngqo kunoma yisiphi isimo somndeni.
Kodwa-ke lolu hlobo ludinga nomsebenzi omningi futhi ubuntu babo bungaba nzima ukubikezela.
Lokhu kuzoba enye yezinja ezijabulisa kakhulu owake waba nazo, kepha futhi enye yezinselele kakhulu.
Uma i-Pitbull Lab Mix ikunakile bese uqhubeka ufunda ukuze ufunde konke odinga ukukwazi ngalo mngani onemilenze emine ...
I-Pitbull Lab Mix Shazi
Pitbull Lab Mix Uhlolojikelele
Izindleko Zokuxuba I-Pitbull Lab Ingakanani?
Ukubukeka Kwe-Lab Pitbull Mix
Umhlahlandlela Wokunakekelwa Kwe-Pitbull Lab Mix
Ungayiqeqesha Kanjani I-Labrabull
IPitbull Lab Mix iyisiphambano esithandekayo phakathi kweAmerican Pitbull Terrier neLabrador Retriever.
Lezi zingxube zivame ukuthatha izici ezinhle kakhulu kubazali bazo ngamunye. Ngakho-ke ungalindela uvemvane lomphakathi olunamandla amakhulu kakhulu. Benza izinja ezinhle zomndeni futhi balungele imindeni ematasa futhi esebenzayo ngokuningi okwenzekayo.
Isisindo: Amakhilogremu angama-30-80.
Intengo: $ 300- $ 700.
Ubuntu: Ukungasebenzi kahle, kwezenhlalo nokuvikela.
Umxube weRottweiler Lab
Intengo : $ 300- $ 600
Isikhathi sokuphila : Iminyaka engu-9-12
Usayizi : 70-115 amakhilogremu
I-German Shepherd Lab Mix
Intengo : $ 200- $ 600
Isikhathi sokuphila : Iminyaka engu-10-12
Usayizi : 35-95 amakhilogremu
I-Pitbull Lab Mix
Intengo : $ 300- $ 700
Isikhathi sokuphila : Iminyaka engu-10-14
Usayizi : 30-80 amakhilogremu
I-Pitbull Lab Mix iyisiphambano phakathi kweLabrador Retriever kanye ne-American Pitbull Terrier.
Ungazazi futhi lezi zinja njengeLabrabulls noma iBulladors.
Lolu hlobo luhlukaniswa njenge-hybrid kepha izinhlobo zazo zabazali zingezinja zeTerrier nezemidlalo.
Zivame ukugcinwa njengezinja ezihambisana nabantu abafuna umngane onothando nosebenzayo. Ngokwengxenye enkulu ungalindela ukuthi ingane yakho ibe nokuvikeleka kwePitbull nentando eqinile, kanye nokungakhathali kweLabrador nemvelo enobungane.
Kodwa-ke ngoba iPitbull Lab Mix iyinhlanganisela yokuzalanisa kwabo akusona isiqiniseko somoya wabo.
Okufanayo kuya ekubukekeni kwabo njengoba bengathola ifa leminye yemibala yengubo nezimpawu zomzimba yanoma yikuphi ukuzala komzali .
Lokhu ngokuvamile akunconyiwe njengohlobo lwabaqalayo.
I-Lab Pitbull Mix iyisondlo esiphakeme ngokwedlulele futhi idinga ukuqeqeshwa njalo nsuku zonke kanye nomphakathi.
Ngokuvamile kunconyelwa abanikazi abanolwazi abakwaziyo ukubhekana nezinja zamandla aphezulu.
Ihlangana kahle nezingane.
Inja engabizi kakhulu.
Ukuqapha nokuqapha kodwa hhayi ngokuzwakalayo.
Kulula ukuphatha kunoMgodi ongaxutshiwe.
Kuthambekele kakhulu emndenini.
Ayikwazi ukuphatha ukushiywa wedwa.
Ubuntu kungaba nzima ukubikezela.
Kungalimaza lapho unesithukuthezi.
I-Pitbull Lab Mix yakho izophumula ngaphansi kombhede wakho ubusuku bonke.
Ikhala elibandayo ebusweni bakho noma ukusondeza okujabulisayo okuzungeze indlu kuzokwazisa ukuthi bakulungele ukuqala usuku.
Ngesikhathi sokudla kwasekuseni i-pooch yakho izokulandela ngqo ekhishini ukuze nobabili nidle ndawonye. Ngemuva kwalokho bazokulandela baye endlini yangasese ukukusiza uvuseleleke.
Ukusa sekuqalile kubo futhi sekuyisikhathi sokuhamba noma ukugijima. Inja yakho izoletha i-leash yabo kuwe bese iyilahla ezinyaweni zakho.
Ngemuva kokuhamba kwakho ekuseni ungaya emsebenzini kodwa uzodinga ukushayela umngani othembekile ukuthi angene azohlola iLabrabull yakho. Bazokuzonda ukushiywa bodwa ngakho-ke qiniseka ukuthi banabantu abaseduze kwabo ngaso sonke isikhathi.
Ngenkathi uphume i-Pitbull Lab Mix yakho izodlula isikhathi ngokudlala nomhleli wezinja zabo nokugada indlu ukuqinisekisa ukuthi akukho okuhlukile.
Uma ubuya ekhaya kufanele usebenze isikhathi esiningi nenja yakho ngangokunokwenzeka.
Uhambo oluya epaki luyindlela enhle yokuthi nobabili nichithe yonke intambama.
Lokhu kuzokhipha noma yimaphi amandla we-pent up okungenzeka ukuthi umfundi wakho ubewonga usuku lonke.
Ngemuva kwemini ende yokugijima nokudlala i-pup yakho izobe isikhathele ngokuphelele. Manje yisikhathi sokudla bese kuba isikhathi sokuhlala phansi uphumule.
ILabrabull ayilali kuze kube umnikazi wayo ulala. Uma ungena embhedeni ubusuku bonke bazoba eduze kwakho.
Umlando wePitbull Lab Mix uyindida kancane.
Kuvunyelwene ngokujwayelekile ukuthi le nja yaqala ukukhuliswa ngasekupheleni kweminyaka yama-1990s ngesikhathi somklami wezinja.
Ukuthi bazalelwa ndawonye ngenhloso noma ngengozi akwaziwa.
Kodwa-ke imixube eminingi yePitbull ikhiqizwa ngenhloso ukuze ikwazi ukukhipha ubuntu bePitbull.
Kulezi zinsuku le nhlanganisela ikhiqizwa ngenhloso njengoba iPitbull Lab Mixes ikhula ngokushesha ekuthandeni.
Akunandaba nomlando wabo kodwa sazi okuningi ngomlando wabazali babo.
Umlando omubi we-American Pitbull Terrier uqala enkomeni eluma inkundla. Ngama-1500s izinja zazisetshenziselwa ukulwa nezinkunzi futhi empeleni lokhu kwakuwukuzilibazisa okudumile.
Kuphela izinja ezinolaka kakhulu bezophumelela ngakho-ke izinja zatholwa ngezindlela ezinonya zokuqeqesha futhi zazalelwa izici ezinolaka kakhulu. Ngenkathi kuqedwa ukukhishwa kwezinkunzi lezi zinja zazibambene zodwa eringini lokulwa nezinja. Isithunzi sikaPitbull njengesilwi esinonya saphila isikhathi eside ngemuva kokuvinjelwa kokulwa nezinja.
Kodwa-ke abathandi bohlobo lusazama ukuqwashisa ngemvelo yangempela yale nja njengomngani oqotho nothandekayo. Zivame ukubizwa ngokuthi yizinja zomzanyana ngenxa yothando lwazo lwezingane.
Umlando weLabrador Retriever unenhliziyo elula kakhulu.
Lezi zinja ezisebenzayo zethiwe ngesifundazwe saseLabrador-Newfoundland lapho zaqala khona ukukhuliswa.
Bazalwa baba ngumngane wokuzingela ophelele. Lezi zinja zazilanda ngentshiseko futhi zilande izinyoni eziwisiwe, zize zigxumele emanzini ukubuyisa idada noma ihansi.
Ngekhulu le-19 lolu hlobo lwathi luthola ukuthandwa ngaphandle kweCanada.
Lolu hlobo lwathola ukuqashelwa kwe-United Kennel Club ngo-1903 kanye nokuhlonishwa kwe-American Kennel Club ngo-1917. Namuhla basalokhu beyizinja zomndeni ezihamba phambili eMelika.
Amaqiniso 5 Okuzijabulisa
IPitbull Lab Mix akuyona uhlobo olwaziwa kakhulu kepha abazali bayo banjalo impela. ILabrador Retriever iseyinhlobo yokuqala yezinja ethandwa kakhulu e-United States.
Ngoba amaLabradors athandwa kakhulu angenye yezinhlobo ezithandwa kakhulu zabazali zamamiksi. I-Lab Rottweiler Mix ne-German Shepherd Lab Mix zifana kakhulu ne-Pitbull Lab Mix.
Lolu hlobo lwenza i-watchdog enhle kepha kube inketho embi kakhulu yenja yokuqapha. Banobungane kangangoba maningi amathuba okuthi bazame ukuqabula umuntu ongenayo kunokuthusa umuntu.
Ngeshwa lolu hlobo lungaphathwa umthetho ofanayo ongafanele njengomzali wabo. Ama-Pitbulls nama-Pitbull Mixes avinjelwe kwabanye omasipala ngenxa yedumela likaPitbull elingafanele njengenja eyingozi.
AmaLabrabulls enza inja enhle kakhulu yezinsizakalo njengoba abazali babo bobabili bezinhle izinja zensizakalo.
IPitbull Lab Mix yomibili isebenza kanzima ne-goofball ethandekayo ngesikhathi esifanayo.
Bazoba inja ejabulisa kakhulu ukuba nayo.
Ukuhlanganiswa kwakho kuzodlala ngokwedlulele futhi kuvame ukwenza njengedlwane elikhulu kuyo yonke impilo yabo. Le yinja yamandla ephezulu kakhulu efuna umnikazi osebenzayo.
Noma ngubani ofuna ukwamukela le nja kumele azinikele ngokugcwele ekuvuseleleni ngokomzimba nangokwengqondo abazokudinga usuku lonke.
Imidlwane emincane izoba nomsindo kakhulu ize ifundiswe ukungakhonkothi.
Indlela enhle yokwenza lokhu ukungawunaki umdlwane okhonkothayo kunokuba uqinisekise lapho ukhonkotha.
Uma isiqeqeshiwe inja yakho izokhonkotha kuphela lapho ijabule noma itatazekile. Lezi zimvemvane zomphakathi ezinoboya zifuna ukwazi wonke umuntu. Babheka nje ukuhlangana nabantu abasha futhi kumele bahlangane njalo kuyo yonke impilo yabo.
Lolu uhlobo lwenja olucabanga ukuthi wonke umuntu ungumngani wabo omkhulu futhi luzobingelela kamnandi omakhelwane bakho.
Bazwana nabo bonke abantu kepha amandla abo aphezulu asho ukuthi afaneleke kangcono izingane ezingaphezulu kweminyaka eyi-10.
I-Pitbull Lab Mix izolimaza kakhulu lapho kungahlanganyeli kahle noma kungakhuthazekile . Ukungqongqoza ifenisha, ukuklebhula izinto zokwakha nokuklwebha izindonga konke kuyizindlela zokuziphatha okufanele uziqaphele.
Ukuziphatha okubi kungagwenywa ngokuqinisekisa ukuthi uhlangabezana nezimfuno eziningi zale nja ngaso sonke isikhathi. Gwema ukunikeza inja yakho noma yiluphi uhlobo lokunaka (okuhle noma okungalungile) lapho bengaziphathi kahle.
Ngenxa yalokhu kuziphatha kuzodingeka uthole umhleli wezinja ngenkathi ungekho - noma ngabe kungamahora ambalwa nje ngenkathi usemsebenzini.
Uma uya eholidini i-pooch yakho izokuthokozela uma uhamba nabo.
Sekukonke le nja ingaba nzima ukuyiphatha kepha ukwethembeka kwabo nothando lwabo kuwe ngeke wazi imingcele. Ungumngane omkhulu wale nja futhi bazozwa umuzwa oqinile wesibopho kuwe nasemndenini wakho.
Kufanele ulindele ukukhokha cishe u- $ 300 kuye ku- $ 700 nge-Pitbull Lab Mix puppy.
Ngeshwa ngoba lemidlwane kwesinye isikhathi iba miningi kakhulu ukuthi eminye imindeni ingakwazi ukuyiphatha igcina isikhosele.
Izindawo zokukhosela zinokudla okuphezulu kakhulu kwezingxube zePitbull zazo zonke izinhlobo.
Izindawo zokukhosela ezijwayelekile zizokhokhisa u- $ 150- $ 250 ngemali yokutholwa.
Umdlwane $ 300- $ 700
Ukutholwa $ 150- $ 350
Izeluleko Zomthengi weLabrabull
Umdlwane weLabrabull ngokuvamile ubiza u- $ 300- $ 700 kuphela.
Yize zingabiza kancane ukuthenga ukondla le nja yamandla aphezulu kubiza kakhulu. Indlela enhle yokuphatha izindleko zokudla ukuthenga isikhwama esikhulu sokudla esingama- $ 55- $ 65. Lokhu kufanele kuthathe cishe izinyanga ezingama-2-3 ngaphambi kokuthi kudingeke ukuthi kufakwe okunye.
Zonke izingxube zePit zidinga ukuqeqeshwa okujulile futhi izifundo eziningi zokuqeqesha zizokhokhisa okuningi ukuqeqesha iPitbull.
Uma ungenaye umngane ongangena futhi ahlole i-pooch yakho ngenkathi uphumile kuzodingeka utshale imali ku-sitter sitters izokhokhisa phakathi kwe- $ 10- $ 15 ngehora.
I-Pitbull Lab Mix edlalwayo idinga amathoyizi amaningi angaphandle angamelana nokugqoka nokudabuka okuningi. Kufanele ugweme amathoyizi ashibhile njengoba uzodinga ukukhokha ngisho nangokwengeziwe ngokufaka okunye njalo.
Uma ukhetha ukuhlenga iLabrabull endaweni yokukhosela ngakho-ke asikho isiqinisekiso sohlu lozalo lomntwana. Kuyafaneleka ukwamukelwa kusuka ekusizeni okukhethekile kuzinhlobo zabazali noma ngabe kusho ukukhokha u- $ 100 ngaphezulu kwemali ejwayelekile yokutholwa.
Ngoba le nja iyayixuba kungaba nzima ukubikezela ukuthi bazobukeka kanjani.
I-Pitbull Lab Mix ingathola ifa lejazi elilodwa lePitbull noma ijazi eliphindwe kabili leLabrador.
Futhi ngoba ziyinhlanganisela azikho izindinganiso ezisemthethweni zokuzalela.
Kufanele ulindele inja ephakathi nendawo nemisipha enemilenze emide egijima.
Izindlebe zazo ngokuvamile ziyindilinga futhi ziyi-floppy kodwa kwesinye isikhathi zingama ziqonde uma zilandela umzali wazo wePit. Amamiksi amaningi anomsila wesithonjana se-Lab we-Lab.
Njengoba zombili izinhlobo zabazali zingamasayizi ahlukene, ubude nobubanzi besisindo sale nhlanganisela bungahluka kakhulu.
Abesilisa abadala bama phakathi kwamasentimitha angu-18-24 futhi banesisindo esiphakathi kwamakhilogremu angama-35-80.
Abesifazane bame phakathi kwamasentimitha angu-17-23 futhi banesisindo esiphakathi kwamakhilogremu angama-30-70.
Le nhlanganisela ingaba umbala oqinile noma ingaba nombala omnyama imaski ngokumelene nesizinda esimhlophe.
Bangaba njalo omunye wemibala eyinhloko yeLabrador (omnyama, ophuzi noshokoledi) noma omunye wemibala yePitbull (grey, brindle noma obomvu).
Futhi njengePitbull, ikhala labo lingafana nombala woboya balo. Ukube umzali wabo ubebomvu noma ikhala eliluhlaza okwesibhakabhaka , lokhu kungavela kumdlwane.
Bangathola ifa lesembatho esiphikisayo sesimo sezulu seLab noma ijazi elilodwa elivalekile lePitbull.
Ukuxuba kwakho kuzokhipha kancane uma benengubo ephindwe kabili kodwa izinja ezigqokiwe ezingashadile zichitha kancane.
Amajazi angashodi avunwa asondele kakhulu emzimbeni kanti ijazi elimbili kuminyene futhi kuyathambile.
Uma inja yakho inengubo ephindwe kabili kufanele ibhululwe okungenani kabili ngesonto. Gwema ukuthatha inja yakho ukushefa noma ukugunda izinwele ngoba lokhu kungalimaza ijazi langaphansi.
I-Pitbull Lab Mix ngumsebenzi onzima kakhulu ukuwenza.
Akuzona izinqumo ezinhle kakhulu zenja yokuqala futhi ngokuqinisekile akuzona ezomuntu ofuna uhlobo olulula lokugcina.
Ukuziqeqesha kanye nokuxhumana nabantu kungukuzibophezela kwempilo yonke futhi uzodinga ukuchitha amahora amaningi uwavuselela ngokomzimba nangokwengqondo nsuku zonke. Le nja inobungani ngokwemvelo kepha uma bevunyelwa ukugijima basendle bangaphenduka iphupho elibi elinoboya.
Uma uzibophezele emsebenzini nasemandleni adingwa yile nja uzoklonyeliswa ngomngani oqotho.
ILabrabull izodinga okungenani imizuzu engama-90 yokuzivocavoca umzimba ngosuku.
Ngakho-ke kufanele uzilungiselele ukuba sezinyaweni zakho nge umlingani wakho omusha osanda kutholwa wokuzivocavoca amahora angafika kwangu-2 ngosuku.
Le nja kufanele ikhishwe kuzo zombili izindlela zokuhamba futhi igijime (isikhathi eside uma siba ngcono). Ukuhamba noma ukugijima kufanele kuhlale noma kuphi ukusuka emizuzwini engama-30 kuya ehoreni.
Gcina le nja ku-leash yabo ngaso sonke isikhathi futhi uqiniseke ukuthi bahlala eduze kwakho.
I-Pitbull Lab Mix ingumpetha wokuzijabulisa nemidlalo ngakho-ke ngeke zihlale zingenzi lutho zihlafune ithoyizi usuku lonke.
Lo ngumsubathi wemvelo okwazi ukwenza zonke izinhlobo zamaphupho.
Ukugijima kwebanga, ukweqa okuphezulu nokubhukuda yonke imidlalo abayithandayo. Vele i-Lab Pit Mix nayo iyawuthanda umdlalo wokulanda nawo.
Ingqikithi Yomsebenzi Wansuku zonke: Imizuzu eyi-120.
Umsebenzi owuthandayo: Landa.
ILabrabull yakho izokhipha impela (ikakhulukazi uma izuza ifa lesambatho esiphindwe kabili seLabrador).
Ibhantshi elilodwa kufanele lihlanjululwe kanye ngesonto, kanti ijazi elimbili kufanele lihlulwe kuze kube kathathu ngesonto. Kufanele usebenzise i-currycomb yensimbi efinyelela zombili izingqimba zejazi labo. Gcina izindlebe zenja yakho zihlanzekile futhi zomile (ikakhulukazi uma izindlebe zazo ziyi-floppy). Geza i-pooch yakho kuphela lapho kunesidingo.
Awudingi ukusika izinzipho zale nja kaningi kakhulu ngoba zizoyigqiba ngenkathi zigijima futhi zidlala.
Xubha amazinyo enja yakho okungenani kanye ngesonto ukuze ugcine isifo sezinsini. Izinja ezingasithandi isixubho zingashukunyiswa umuthi wokuxubha omnandi.
Awusoze wabona inja idla kakhulu njengePitbull Lab Mix.
Le pooch enkulu futhi esebenzayo idinga ama-calories ayi-1600 ngosuku ukuwagcina egcwele.
Kufanele uhlukanise lezi zinkomishi ezi-4 ze-kibble zibe izidlo ezimbili.
Ukudla kwabo okukhulu kunakho konke kufanele kunikezwe ngaphambi nje kwamahora abo okusebenza kakhulu.
Ukudla kwenja yakho kufanele kube amaprotheni kakhulu, nenani elincane lamafutha nama-carbs emithonjeni yemvelo. Lolu hlobo futhi lusebenza kahle ekudleni kokudla okuluhlaza.
Faka ukudla kwenja yakho ngezithelo nemifino ngokuqukethwe okwengeziwe kwamavithamini. Amaqanda abilisiwe namazambane enza ukuphatha okuhle okunomsoco.
Umdlwane wakho uzozuza amakhilogremu ama-2-4 kuwo wonke amasonto ama-4 okukhula njengedlwane. Phakathi namasonto abo okuqala ayi-12 umfundi wakho uzofinyelela amakhilogremu ayi-6-12.
Bazothola isisindo sabo esikhulu phakathi kwezinyanga eziyisithupha nonyaka owodwa. Ngaleso sikhathi lapho bazogqoka cishe isigamu sesisindo sabo sabantu abadala.
Inja yakho ephelele isisindo esiphelele esingamakhilogremu angu-30-80 izofinyelelwa phakathi kosuku lwabo lokuzalwa olungu-1 nolwesibili.
Isifiso esikhulu sale nja singabathola kangcono.
Amamiksi wePitbull Lab angahlushwa ukuqunjelwa okuyisimo esibuhlungu sesisu esivame ukubangelwa ukudla noma ukuphuza ngokushesha okukhulu.
Izimpawu zifaka phakathi ukuphalaza nokukhipha amathe nesisu esivele sivuvuke.
IBloat kufanele njalo iphathwe njengesimo esiphuthumayo sezokwelapha esidinga ukunakekelwa kwezilwane. Kungavinjelwa ngokuqinisekisa ukuthi inja yakho ayidli ngokushesha okukhulu futhi imise ukuzivocavoca ngokushesha lapho idla.
Ngaphezu kwezinkinga zesisu lolu hlobo lungaba nezinkinga ezivamile zokuhlangana. I-hip dysplasia iyenzeka lapho amalunga enqulu ekhululekile futhi engalingani.
Isimo sivame kakhulu ezinhlotsheni ezinkulu nezisebenzayo zezinja. Kubangela ubuhlungu, ukungahambi kahle futhi kungaholela ekuqaqambeni kwamathambo.
Izimpawu zifaka ukungasebenzi nenja yakho inganqeni ukuhamba noma ukuma. I-pooch yakho ingakhala noma ikhale ngobuhlungu futhi ingahudula noma ixege emlenzeni obuhlungu. Isimo singelashwa ngokuhlinzwa kepha singalawulwa ngemithi yezinhlungu nangokwelapha ngokomzimba. Ukuthi lesi simo siphathwa kanjani kuncike ebukhulwini baso.
I-Pitbull Lab Mix Live Isikhathi Eside Kangakanani?
Kufanele ulindele ukuthi i-Pitbull Lab Mix iphile iminyaka eyi-10-14.
IPitbull Lab Mix ihlakaniphile kakhulu futhi iyaqeqeshwa kakhulu.
Kodwa-ke ngalokhu kuqeqeshwa kohlobo akugcini ebuntombini - ukuzibophezela kulolu hlobo ukuzibophezela ekuqeqeshweni impilo yonke kanye nokuzijabulisa.
Lokhu kujabulisa kwabantu abanezinyawo ezine kuyajabulisa uma ujabulile.
Yenza konke ongakwenza ukuze ube yi-cheerleader engcono kakhulu yezingane zakho.
Thatha indlela eqinile kodwa efanelekile enokuqiniswa okuningi okuhle. Ukuziphatha okungafanele kufanele kunganakwa kunokuba kukhuthazwe noma kuqinisekiswe.
Lapho ingane yakho ithola okuthile kahle ibazise ukuthi bangumfana noma intombazane enhle kangakanani. Ukudumisa kwakho kuzoba yisikhuthazo esikhulu somsebenzi owenziwe kahle. I-Pitbull Lab Mix kumele inikezwe isikhathi esiningi sokuhlangana nabangane babantu kanye nabezinja. Bathanda ipaki yezinja futhi benza kahle kakhulu ekunakekelweni kwezinja zezinja futhi.
Bafuna ukugcina umzimba nobuchopho babo kumatasa.
Banikeze amathoyizi nemidlalo edinga ubuchopho obuthile, futhi uzibandakanye nezinselelo zokuzijabulisa.
Thatha umdlalo owuthandayo weRetriever bese ufaka i-spin yezemidlalo kuwo ngokuwuguqula ube ngumdlalo wokubamba.
Umdlalo wokubamba uqeqesha inja yakho ukulandela imiyalo futhi ugijime amabanga amade. Kungenziwa ngebhola, induku noma i-Frisbee.
Ngenkathi udlala ungaqeqesha futhi usebenzise imiyalo efana nokuthi go, gxuma bese uyilahla.
Le nhlanganisela iyinja esebenzayo futhi edlalayo ekhula kahle phakathi kwemindeni ematasa.
Ngeke uphinde ube nesizungu nalo mngani omnandi onoboya eceleni kwakho - iLabrabull ingomunye wabangane abathembekile ongabacela.
Kodwa-ke ngokushintshana nokwethembeka kwabo bazodinga ukugcinwa bematasa.
Le yinja yezemidlalo edinga ukuvuselelwa ngokwengqondo nangokomzimba.
Uma wenza konke kahle nge-pooch yakho lapho-ke bazokukhokhela ngalo lonke uthando abanalo.
Uma usebenzisa i-Pitbull Lab Mix awulethi isilwane ekhaya - uletha ekhaya ilungu elisha lomndeni wakho!
uphayinaphu ulungele ukuthi udliwe yizinja
inja yami injani
amagama enja yamantombazane abelusi baseJalimane
umngcele we-collie chocolate lab mix
izindleko zokuxuba ezomalusi waseJalimane